Qalabka dharka nabdoon ee Shiinaha ee loogu talagalay soosaarayaasha jeebka shaqada iyo alaab-qeybiyeyaasha | Baoerxi
Waxaa loogu talagalay in lagu rakibo inta ugu badan ee shaqaaluhu ay shaqeeyaan.
100% ilaalin wax ku ool ah.
Ka hortagga dhaawac shil ah.
Waxaa laga sameeyay 100% Polyethylene.
Naqshadeynta Ergonomic raaxada leh.
Sida loo baahan yahay.
Waxaa loo adeegsaday marka shaqadaadu ku lug leedahay jilbaha
Xoog, Xadhig adag iyo Dabacsanaan Leh
Waxaa loo naqshadeeyay in lagu xidho suumanka dusha sare ee jeebka
Waxaa laga sameeyay cadaadiska nuugista xumbo
Cabbirka caadiga ah ee jilibka, oo ku habboon inta badan surwaallada suunka jilibka
Kooxda khibradda leh ee farsamada, si ay u bixiyaan la-talin ku saabsan sida ugu wanaagsan doorashada xulashooyinka jilibka ee EVA iyo xalka, si ay kaaga caawiyaan inaad horumariso Cuntadaada hada, kharashka iyo howshaada.
Samee nidaam hubsiimo tayo leh oo la aqoonsan yahay iyo gobolka xarunta wax soo saarka farshaxanka, si loo hubiyo tayada badeecada iyo badbaadada; Waxa kale oo aad haysataa borotokoolka QA iyo raad-raaca nidaamka, si aad u ilaaliso qayb kasta alaabooyinka la raadraaci karo.
Kooxda saadka ee xirfadleyda ah si ay nooga dhigaan awood aan ku gaarsiino alaabadaada sida saxda ah ee lagu heshiiyey jadwalka iyo halka loo socdo.
Xiga: Gawaarida jumlada ee loo yaqaan 'EA foam foam pads CE